Kopisha ngokushesha bese ulondoloza izithombe nemibhalo nge-iOS 15 Hudula & Ukulahla | Izindaba ze-IPhone
UMiguel Hernandez | 15/10/2021 15:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Okokufundisa namanyuwali
iOS 15 Luhlelo lokusebenza lwenkampani yeCupertino oluthola ukugxekwa okukhulu eminyakeni yamuva, abekho abasebenzisi abambalwa abaye bakweqa lokhu kubuyekezwa ngokuthi "okuncane okusha", empeleni, amanani wokulanda we-iOS 15 yiwona athandwa kakhulu kwimemori. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi i-iOS 15 ifaka izici eziningi ezintsha ezenza izimpilo zethu zibe lula.
Sikukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani Hudula & Yehla ku-iOS 15, isici esikuvumela ukukopisha nokunamathisela umbhalo phakathi kwezinhlelo zokusebenza, kanye nokulanda izithombe eziningi kusuka ku-Safari. Ngalezi zindlela ezilula uzokwazi ukusebenzisa i-iPhone yakho noma i-iPad njengochwepheshe weqiniso.
1 Kopisha bese unamathisela umbhalo ngokuhudula udedele
2 Kopisha bese unamathisela isithombe ngokuhudula udedele
3 Landa izithombe eziningi kusuka ku-Safari
Kopisha bese unamathisela umbhalo ngokuhudula udedele
Okukodwa kokusebenza okuphawulwe kancane kweDrag & Drop kusebenza ngokunembile yilokho kwe- kopisha futhi unamathisele umbhalo, futhi kimi kubonakala sengathi ilusizo kakhulu. Ukukopisha nokunamathisela umbhalo usebenzisa i-Hudula & Ukulahla kulula kakhulu, sikukhombisa:
Khetha umbhalo ofuna ukuwukopisha, imibhalo ephelele kanye nemisho. Ukuze wenze lokhu, thepha kabili embhalweni bese uhambisa isikhethi.
Manje cindezela kanzima / eside embhalweni (i-3D Touch noma i-Haptic Touch).
Lapho usuyikhethile, ngaphandle kokuyikhipha, islayida (swype up).
Manje ngesinye isandla ungazulazula ku-iOS, zombili usebenzisa ibha engezansi futhi uye kuhlelo olufunayo, ngaphandle kokukhipha umbhalo.
Manje khetha ibhokisi lombhalo lohlelo lokusebenza olufunayo futhi lapho isithonjana (+) sivela luhlaza, sidedele
Kulula ukukopisha nokunamathisela umbhalo phakathi kwezinhlelo ezahlukahlukene.
Kopisha bese unamathisela isithombe ngokuhudula udedele
Enye yamathuba amakhulu wohlelo lwe-iOS 15 Hudula & Ukulahla yilokho kwe ukwazi ukuthatha nokuletha izithombe kuzinhlelo zokusebenza ezisithandayo ngendlela elula.
Khetha isithombe ofuna ukusikopisha. Ukwenza lokhu, cindezela kanzima / eside esithombeni (i-3D Touch noma i-Haptic Touch).
Ngalesi sikhathi, uma ufisa, ungangeza izithombe eziningi ngokuzithinta ngesinye isandla.
Manje usungazulazula nge-iOS, zombili usebenzisa ibha engezansi bese uya kuhlelo olufunayo, ngaphandle kokulahla umbhalo.
Manje khetha uhlelo lokusebenza lapho ufuna ukukopisha khona isithombe noma isethi yezithombe nalapho isithonjana (+) sivela siluhlaza, sikhiphe.
Landa izithombe eziningi kusuka ku-Safari
Lokhu kubonakala kimi ngokungangabazeki okunye kokusebenza okuhle, futhi yilokho uzokwazi ukulanda izithombe eziningi ngendlela ofuna ngayo ku-Safari ngaphandle kokuzilanda ngamunye ngamunye.
Iya ku-Google Izithombe bese useshe okufunayo. Ukwenza lokhu, cindezela kanzima / eside esithombeni (i-3D Touch noma i-Haptic Touch).
Manje usungaya ngqo kuhlelo lokusebenza lwezithombe ze-iOS, ngokusebenzisa iMultitasking futhi ngqo kusuka ku-Springboard. Khumbula, ngaphandle kokukhulula izithombe ezikopishiwe.
Manje khetha uhlelo lokusebenza lapho ufuna ukukopisha khona isithombe noma isethi yezithombe futhi lapho isithonjana (+) sivela siluhlaza, shiya izithombe ezikopishiwe kuhlelo lokusebenza lwezithombe.
Ilula kakhulu le ndlela entsha yokulanda izithombe eziningi ngasikhathi sinye ku-iOS 15.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » Kopisha ngokushesha futhi ulondoloze izithombe nemibhalo nge-iOS 15 Hudula bese ulahla